Yalu Jailbreak kodhi kodhi yeiyo iOS 10.2 yave kuwanikwa | IPhone nhau
Kunyangwe Yalu ichiri kunamira nebeta tag, hatigone kutaura kuti kukura kwayo kuri kumira. Muchokwadi, Luca Todesco nezuro akaburitsa isina kukwana sosi kodhi ye Yalu Jailbreak nerutsigiro rweIOS 10.2. Izvo zvakakosha kuti utarise izwi rekuti "kukwana", nekuti izvo zvakaburitswa inongori chikamu chekutanga cheiyo software iyo ichiri kushayikwa imwe yekodhi, kusanganisira zvimwe zvakakosha zvigamba zvichazodiwa kuti software iwane yekupedzisira vhezheni yechiratidzo.
Iyo yakaburitswa kodhi yakafanana neiyo yekutanga vhezheni yeYalu Jailbreak, iyo yaingowanikwa chete kune iyo iPhone 6s / Plus, iPhone 7 / Plus uye zvese zviri zviviri iPad Pro.Nguva pfupi yapfuura, Todesco yakati yaizoburitsa akati wandei zvigamba, kusanganisira imwe yaizo wedzera rutsigiro rweIOS 10.2. Nhau dzakaipa ndedzekuti iyi jailbreak kana iyi tsigiro haizosvika kuPhones dzakatangwa naApple munaGunyana 2016, ndiko kuti, iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Yalu Jailbreak yeIOS 10.2 Zvino Inowanikwa, Asi Isina Kukwana
Iyo kodhi yeiyo vhezheni yeYalu Jailbreak inotsigira iOS 10.2 yave kuwanikwa papeji re GitHub naLuca Todesco naMarco Grassi pachake, uye "zvisina kukwana" zvinonyanya kureva izvo iri kugumira maererano nerutsigiro kune zvishandiso zvishoma uye vashoma vhezheni dzeIOS izvo zvisina kutsanangurwa pane ino peji. Kune rimwe divi, uye mune zvese zvingangoitika, ichave ichishaya yakakosha yekuchengetedza chigamba iyo yakakurumbira hacker yakawedzera mune yakafambira mberi vhezheni yeYalu. Pasina rumwe ruzivo nezvazvo, zviri nani kuyeuka chiziviso chaTodesco payakaburitsa vhezheni yekutanga yeYalu iyo yakati vagadziri chete ndivo vanofanirwa kuisa software.
Tichifunga nezve kuti pane vatogadziri vanoto shanda pairi, ndingapa zano vashandisi vane iOS 10.2 pane yavo kifaa kuti vave nemoyo murefu. Zvingangodaro kuti isu tichava nechishandiso chakanyanya kumberi munguva pfupi uye yakabwinyiswa, iyo yaizovimbisa yakapusa yekumisikidza maitiro, rutsigiro rukuru uye kugadzikana kukuru kana yaiswa. Kana iwe kunyangwe isu tichiyambira iwe ukasarudza kuenderera, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Yalu Jailbreak iOS 10.2 Source Code (Isina kukwana) Zvino Yava Kuwanikwa
Chinyorwa chakanaka kwazvo, asi ini ndine mubvunzo ...
Ndiri pane yakapfuura JB, 8.4 pa iPhone uye 9.3.2 paPadad. Ndinoda kukwanisa kushandisa iyi JB nyowani, asi handizive kana ndiri panguva, kunyangwe ichigere kushanda zvizere, nekuti panobuda iOS 10.3 handizive kana vachiramba vachisaina 10.2.
Unogona kundipa zano chimwe chinhu? kana mumwe munhu anogona kuona izvi kana uchigona kundibatsira .. Ndatenda!
Ehe, ivo vanoramba vachisaina pana 10.2. parizvino hongu. Ndiri kuzviisa neITUNES izvozvi.
Mhoroi, Micael. Sekuudza kwaSergio, zvinogona kuitwa. Pawebhu iyi https://ipsw.me/10.2 unogona kuona kuti ichiri kusaina, zvinoreva kuti inogona kuiswa neTunes kana ukadzvanya ALT kiyi (pane macOS) kana Shift (paWindows) pakudzvanya "Gadziridza." Panguva iyoyo iyo inokutendera iwe kutsvaga iyo .ipws faira iwe yaunogona kurodha pasi kubva pane iyi link iripamusoro.
Zvinosuruvarisa kuti nanhasi haina jailbreak ye iphone 6 kana 6 plus
Google inoti Android Wear 2.0 inoderedza kutsamira paiyo iPhone